Anime Archives - MoviesFan
Harley Quinn နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားရတော့မယ့် Kaley Cuoco
ကမ္ဘာကျော်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲရှည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Big Bang Theory မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူ အမေရိကန်မင်းသမီးချော Kaley Cuoco ကတော့ မကြာခင်မှာ ရိုက်ကူးသွားတော့မယ့် Adult Animated Series “Harley Quinn” မှာ DC Comics ရဲ့ Super Villain “Harley Quinn” နေရာကနေ အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ပါဝင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အသက် ၃၂နှစ်အရွယ် Read More
Animation, Anime, celebrity news, DC, Hollywood, Series
Skyscraper ရဲ့ ဝင်ငွေကိုကျော်တက်ခဲ့တဲ့ Hotel Transylvania: Summer Vacation
Sony ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ တတိယမြောက် Hotel Transylvania ရုပ်ရှင်ဟာ နိုင်ငံပေါင်း လေးဆယ့်နှစ်နိုင်ငံမှာ ပြသခဲ့ပြီး ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၄၆.၄ သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Dawyne Johnson ပါဝင်တဲ့ Skyscraper ရုပ်ရှင်ကတော့ နိုင်ငံတကာဝင်ငွေ သန်းလေးဆယ်ပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Hotel Transylvania ရုပ်ရှင်ဟာနိုင်ငံတကာဝင်ငွေမှာပဲ Skyscraper ကိုအသာစီးယူခဲ့တာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလည်း Hotel Transylvania ရုပ်ရှင်ဟာ Dawyne Johnson ရဲ့ရုပ်ရှင်ဝင်ငွေကို Read More
Anime ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ Flavors of Youth
Netflix ရဲ့ တကယ့်ကိုအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Your Name ဆိုတဲ့ Anime Movie လေးကို Anime Fan မှန်ရင်သိကြမှာပါ။ အခုလဲ Netflix ကနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုကို လှမ်းဖို့ပြင်နေပါပြီ။ ဒါကတော့ Flavors of Youth ဆိုတဲ့ Anime ရုပ်ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားလေးရဲ့တရားဝင် Netflix မှာ ဖြန့်ချိမယ့်ရက်ကတော့ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားလေးက နာမည်အတိုင်းပဲ လူငယ်တွေရဲ့လတ်ဆက်တဲ့မျှော်လင့်ချက်၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ လက်တွေ့ဘဝတွေအကြားက အနှစ်သာရကိုပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Trailer ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့ ၃ မြို့မှာနေကြတဲ့ Read More
Batman Ninja ကို ဒီ ၂ မိနစ်စာ ဗီဒီယိုမှာ အမြည်းကြည့်ကြမယ်
Batman တစ်ယောက် Gotham City ကနေ ဂျပန် Feudal ခေတ်ကို ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကို တစ်နေ့တုန်းက ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ၂ မိနစ်စာ ဗီဒီယိုလေးမှာ အဖြေရှာကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Batman Ninja မှာ Batman နဲ့ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက Gorilla Grood လက်ချက်နဲ့ အချိန်နောက်ပြန်ခရီးသွားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရှိုဂန်တွေ၊ ဆာမူရိုင်းတွေရှိတဲ့ခေတ်ကို ရောက်သွားကြပါတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ Batman ရဲ့မဟာရန်သူတော်ကြီး Joker က အာဏာတွေအင်မတန်ကြီးမားနေပြီး Batman ကို အသေရရ အရှင်ရရ လိုက်ပါတော့တယ်။ Read More
Action & Adventure, Anime, DC
ဧရာမ Joker စက်ရုပ်ကြီး၊ ဆူမို Bane ၊ နင်ဂျာ Batman တို့ပါဝင်တဲ့ ‘Batman Ninja’ Anime Movie ရဲ့ Trailer အသစ်
Warner Bros, Japan ရဲ့ Batman Ninja ရုပ်ရှင်ရဲ့ trailer ကတော့ အမှန်အကန်ကိုလန်းလွန်းပါတယ်။ Katana တစ်ကားကားနဲ့ Batman ကြီးကိုမြင်ရတာကိုက ရယ်လည်းရယ်ချင်မိသလို စိတ်ထဲမှာလည်း ကြိတ်ပြီးသဘောကျမိစေပါတယ်။
Warner Bros က ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာတုန်းက ကြေညာခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာတုန်းက ပထမဆုံး trailer ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး trailer ကတော့ ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ဒုတိယမြောက် trailer ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ပထမ trailer မှာမပါဝင်တဲ့ footage အသစ်တွေထည့်သွင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ Anime ရုပ်ရှင်ကို ရှိုဂန်တွေကြီးစိုးတဲ့ Feudal ခေတ်မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ Batman နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေရော ရန်သူတွေပါ Gorilla Grodd ရဲ့ အချိန်ခရီးသွားစက်လက်ချက်နဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်ကနေ အဲဒီခေတ်ကိုရောက်ရှိသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်ခရီးသွားလိုက်တဲ့အတွက် Batman ရဲ့　စီးတော်ယာဉ်လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့ Batmobile, Batwing, Batcycle တွေအားလုံးက သုံးစားမရဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့ Fedual Lords တွေအဖြစ်နဲ့ရှိနေတဲ့ Joker အပါအဝင် လူဆိုးတွေအားလုံးကို နှိမ်နင်းဖို့က သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ စွမ်းအားကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ဖန်တီးထားသူတွေကလည်း anime industry ထဲက ထိပ်ထိပ်ကြဲတွေပါပဲ။ Character Design ပိုင်းကို Afro Samurai ရေးသားခဲ့သူ Okazaki Takashi က ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ညွှန်းကို Gurren Lagann နဲ့ Kill la Kill တို့ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတွေကိုရေးသားပေးခဲ့သူ Nakashima Kazuki က ရေးသားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့သီချင်းသံစဉ်တွေ၊ နောက်ခံတီးလုံးတွေကို Psycho Pass နဲ့ JoJo’s Bizarre Adventure တို့ရဲ့ သီချင်းတွေကိုရေးစပ်ပေးခဲ့တဲ့ Kanno Yugo က တာဝန်ယူဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါရိုက်တာအဖြစ် JoJo’s Bizarre Adventure ရဲ့ အဖွင့်အခန်းတွေကို ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ Mizusaki Jumpei တာဝန်ယူရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ production quality ပိုင်းက အမှန်အကန်လန်းမယ်ဆိုတာ မေးခွန်းတောင်ထုတ်စရာမလိုပါဘူး။ တကယ်လန်းမလန်းဆိုတာကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ trailer မှာ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
Trailer မှာမြင်ရသမျှကတော့ အကုန်လုံးအလန်းတွေချည်းပါပဲ။ Batman တစ်ယောက် Samurai ချပ်ကာကြီးဝတ်ပြီး Katana ကြီးနဲ့လိုက်ရမ်းနေတာတွေ၊ Fedual ခေတ်အသွင်နဲ့ Bat Family ၊ ဧရာမစက်ရုပ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ Joker ၊ Sumo အသွင်နဲ့ Bane.. မြင်သမျှအားလုံး အဆန်းတွေချည်းပါပဲ။ ပြီးတော့ ဂျပန်ဗားရှင်းက Joker ရဲ့အသံကတော့ လုံးဝကို အပျံစားပါပဲ.. ကြားဖူးသမျှ Joker အသံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တောင် ထိပ်ဆုံးနားမှာ သေချာပေါက်ပါဝင်ပါတယ်။ အချို့သူတွေကတော့ Batman Ninja လို့လည်းဆိုသေး Samuria လိုချနေတယ်လို့ ထောက်ပြကြပေမယ့် trailer ရဲ့အဆုံးနားလေးမှာ Batman က Ninja Hand Sign တွေလုပ်ပြထားတဲ့အတွက် တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပါပဲ.. Naruto လို့ Chakara နဲ့တီးပြလောက်မှာမဟုတ်ပေမယ့် Ninjutsu သုံးမယ်လို့တော့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
အောက်မှာတော့ Batman Ninja ရဲ့ပထမ trailer ကို တစ်ပါတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Trailer ၂ ခုလုံးက မတူညီကြတာမို့ ၂ ခုလုံးကို ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Batman Ninja ကို ၂၀၁၈ ဧပြီ ၂၄ မှာ Digital Release ၊ မေ ၈ မှာ Physical Release အနေနဲ့ ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Action & Adventure, Animation, Anime, DC
Anime ချစ်သူတွေ ချမ်းသာတဲ့ Waifu တွေထဲက ဘယ်သူ့ကို လက်အထပ်ချင်ဆုံးလဲ
Anime ချစ်သူတွေမှာ ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံး Waifu လေးတွေတော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ Personality လေးကိုကြိုက်လို့၊ ရုပ်ချောလို့၊ ကိုယ်အမှန်အကန်ကြွေတဲ့ appearance trait လေးတွေရှိလို့.. အစရှိပြီး အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Waifu တွေကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ Twintail လေးနဲ့မို့ မြင်မြင်ချင်းကြွေသွားတာတို့.. Tsundere လေးမို့ ခိုက်မိသွားရတာတို့.. Onee-san type မို့လို့ ရင်ဘတ်ကြီးဖလန်းဖလန်းဖြစ်သွားရတာတို့.. အစအဆုံးသာပြောရရင် ကုန်မှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Ojou-sama type လို့ပြောလို့ရတဲ့ ချမ်းသာတဲ့ background ကလာတဲ့ ကောင်မလေးမို့လို့ Waifu အဖြစ်ရွေးချယ်မိတာမျိုးရောရှိပါသလား။ ဂျပန် website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AnimeAnime ကတော့ သူ့ရဲ့စာဖတ်သူတွေကို Ojou-sama အယောက် ၂၀ ထဲက သူတို့လက်ထပ်ချင်တဲ့သူကိုရွေးချယ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ထိပ်ဆုံး ၁၀ ယောက်ကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
10. Sanzenin Nagi, Hayate the Combat Butler
9. Sakuranomiya Maika, Blend S
8. Akimoto Katherine Reiko, KochiKame
7. Kotobuki Tsumugi, K-On!
6. Bulma, Dragon Ball
5. Rize, Is the OrderaRabbit?
4. Suzuki Sonoko, Detective Conan
Cardcaptor Sakura series ထဲက မင်းသမီး Kinomoto Sakura ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Daidouji Tomoyo က vote စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၁% နဲ့ တတိယနေရာကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Sakura ရဲ့ ဝတ်စုံမျိုးစုံကိုချုပ်ပေးတာတွေ၊ သူမရဲ့ mission တွေကို ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းလိုက်တင်ပေးတာလေးတွေက Tomoyo ကို fan တွေနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
2. Nishikino Maki, Love Live!
Love Live! ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင် ၉ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Nishikino Maki ကတော့ vote စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၂% နဲ့ ဒုတိယနေရာကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေက ရက်ရက်စက်စက်ချမ်းသာတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်စရာ Idol လေး.. အဲဒီတော့ fan တွေသူ့ကိုရွေးချယ်ကြတာ မထူးဆန်းဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
1. Yuuki Asuna, Sword Art Online
Sword Art Online ထဲကမင်းသမီး Yuuki Asuna ကတော့ vote စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၇% နဲ့ ပထမနေရာကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Game ဆော့တာလည်း အမှန်အကန်ကြမ်း၊ အချက်အပြုတ်လည်းဝါသနာပါ၊ မိဘတွေကလည်း ရှယ်ချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဆိုတော့ anime ချစ်သူတွေ Asuna ကိုသဘောကျကြတာ မဆန်းပါဘူး။
ကဲ.. ဒီရလဒ်အပေါ် ဒီက anime ချစ်သူတွေ ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ.. ဒီ list ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ waifu ပါဝင်ပါသလား.. ဒါမှမဟုတ် ဒီ list ထဲမှာပါဝင်သင့်တယ်လို့ထင်တဲ့ character များရှိပါသလား.. သင်ထင်တာလေးတွေကို comment မှာ ပြောသွားကြပါဦး။